Inkumbulo ye-USB ne-microSD yakho konke ukusetshenziswa kwe-Kioxia [UKUBUYEKEZA] | Izindaba zamagajethi
Izinkumbulo ze-USB ne-microSD yakho konke ukusetshenziswa kwe-Kioxia [BUYEKEZA]
Izixazululo zesitoreji zikhule ngokumangazayo, ikakhulukazi uma sibheka izidingo zabasebenzisi kanye namandla wamafayela amasha we-multimedia anokulungiswa okungu-4K okuthandwa kakhulu. Yingakho umkhiqizo owaziwayo I-Kioxia inqume ukuvuselela uhla lwayo lwamakhadi e-MicroSD nezinti ze-USB.
Namuhla sinetafula lokuhlola imemori ye-U365 USB nekhadi le-Exceria 128 GB le-microSD elivela eKioxia. Thola ukusebenza kwayo namakhono ayo afanele okwenza imisebenzi yokurekhoda, yokugcina nokudlala, ngaleyo ndlela ithuthukise indlela odala ngayo nokusebenzisa okuqukethwe.
1 I-365GB TransMemory U128
2 I-Exceria microSDXC UHS-I 128GB
I-365GB TransMemory U128
Kulokhu siqala ngememori ye-Kioxia 128GB USB. Ukwethulwa kwamuva komkhiqizo kunikezwa ngamakhono we 32/64/128 no-256 GB. Ukusetshenziswa kwayo okuhle ngukuthi ukudluliswa kwedatha futhi kunobuchwepheshe be-USB. 3.2 uGen 1.
Usayizi: X x 55,0 21,4 8,5 mm
Isisindo: I-9 amagremu
Inethebhu yokuhambisa lokho kuzosivumela ukuthi songe i-USB futhi ngaleyo ndlela kuvikele ukuphela kokuthuthukisa ukuqina komkhiqizo. Njengoba bekulindelekile, sinokuhambisana neWindows 8 phambili nama-macOS X 10.11 kuqhubeke.
Thenga i-Kioxia U365 kusuka ku- € 13,30 ku-Amazon
Njengenzuzo, imikhiqizo ye-Kioxia yonke inewaranti yeminyaka emihlanu. Yenziwe ngepulasitiki emnyama egxile ngokusobala ekuqineni. Ekuvivinyweni kwethu sithole ukusebenza kokubhala okungama-30 MB / s nokufunda okungaba ngu-180 MB / s, okuthile ngaphezu kwedatha enikezwa ngumkhiqizo, eqinisekisa okungenani ama-150 MB / s.
Ngale ndlela, kuba ngumkhiqizo ofanelekile wokudlulisa amakhophi wethu wesipele noma ube nokugcina ngobuningi kwesibili ku-PC noma kwi-Mac yethu. Sizihlaziye mathupha ukusetshenziswa kokudlulisa ama-movie we-4K HDR, okusivumela ukuthi sisakaze ividiyo kulezi zimfanelo kuze kufike kuma-FPS angama-30, ngakho-ke kubonakala njengenketho eguquguqukayo futhi ethokozisayo. Intengo yayo izoba phakathi kwe- € 20 kanye ne- € 30 kuya ngephuzu lokuthengisa kuze kufike ku-256 GB.
I-Exceria microSDXC UHS-I 128GB
Manje sesiphendukela kumakhadi we-microSD, ikakhulukazi imodeli ye-128GB yohlu lwayo oludumile lwe-Exceria olukhonjiswa ngokuluhlaza. Njengoba sishilo ngaphambili, sinomkhiqizo we-microSDXC I weClass 10 U3 (V30) igxile kakhulu ekuqopheni nase ukudlala ividiyo ngesinqumo se-4K njengoba bekulindelekile. Ngakho-ke, ikhonjiswa njengomkhiqizo onconyiwe wezingcingo ezisezingeni eliphezulu noma amakhamera wokuqopha nezithombe.
Kulokhu, ukuhlaziywa okwenziwe kunikeze imiphumela efanayo kulabo abakhangiswe ngumkhiqizo, kufinyelela kuma-85 MB / s wokubhala kanye ne-100 MB / s yokufunda. Lokhu kusiza kakhulu uma kukhulunywa ngokudlulisa imininingwane esiyithwebulayo ngesikhathi sangempela, ukuqopha nokukhiqiza kabusha kube kuhle. Ekuvivinyweni kwethu sisebenzise iDashcam eqopha ngo-1080p kuma-60FPS futhi asikatholi zinkinga. Sisebenzise futhi iXiaomi Mi Action Camera 4K futhi ihambisane ngempumelelo nedatha enikezwa yiKioxia kungosi yayo yewebhu ngokufunda nokubhala.
Thenga ikhadi le-Kioxia microSD
Sekukonke sizokwazi ukugcina cishe izithombe ezingama-38500, cishe imizuzu eyi-1490 yokurekhoda esinqumweni I-HD ephelele noma imizuzu engu-314 yokurekhoda kwe-4K. Ngokuningiliziwe, leli khadi lihambisana nayo yonke imikhiqizo ye-Android, linokuzivikela kwe-ESD, linamanzi ne-X-ray proof (ngeke liphule uma lihlaziywa ngalobu buchwepheshe). Ngendlela efanayo, inokuvikela okushisa ngokweqile ukugwema ukulahlekelwa yidatha yakho ngenxa yephutha lokushisa futhi iyamelana nokushaqeka.
I-HD (12 Mbps)
I-HD (17 Mbps)
I-HD ephelele (21 Mbps)
I-4K (100 Mbps)
I-Akhawunti nge I-BiCS Flash eqinisekisa ukuqina kwayo kumakhamera okuqapha kanye nama-dashcams ahlala eqopha futhi esusa okuqukethwe kwisitoreji, inketho enhle yokwenza okuthunyelwe okuzimele kwezokuphepha.
Njengasezikhathini ezedlule, I-Kioxia inikeza le microSD ekugcineni kwe 32/64/125 no-256 GB esewonke, ukusebenzisana namadivayisi amadala we-FAT32.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izinkumbulo ze-USB ne-microSD yakho konke ukusetshenziswa kwe-Kioxia [BUYEKEZA]
Sivivinye i-USB-C Hub ka-Aukey, i-8-port all-in-one ephelele iMacBook M1 entsha [REVIEW]